Nqamula i-switch switch abakhiqizi & abahlinzeki - China Nqamula iSwitch Factory
I-GW-12 Outdoor AC HV Nqamula Iswishi
I-GW □ -12outdoor AC HV disconnect switch (disconnect switch for short hereunder) isetshenziswa ohlelweni lwamandla kagesi anemvamisa elinganisiwe engu-50Hz, i-voltage elinganisiwe engu-12kV, yenzelwa kakhulu ukwenza noma ukwephula isekethe ngaphansi komugqa ohlinzeka amandla kagesi kwimishini yohlelo lokusabalalisa amandla aphezulu lwangaphandle. Uma kunjalo, uhlobo lokunqamula ukungcoliswa komoya lungakwazi ukuxazulula ngempumelelo ukungcola ngesikhathi sokusebenza ukuze kuhlangatshezwane nezidingo zabasebenzisi abasendaweni engcoliswe kakhulu.
GW9-24 Outdoor AC HV Nqamula Iswishi
Uchungechunge lwe-GW9-24 (W) uchungechunge lwe-Outdoor HV disconnect luyisakhiwo esisodwa sepali, esisetshenziselwa ukuvula noma ukuvala amasekethe ngaphansi kwamandla kagesi kepha awukho umthwalo ku-24kV wesistimu kagesi yangaphandle. Inedivayisi engaguquki yokudweba kanye nedivayisi yokuzikhiya, nokusebenza komphumela ngokuvikela i-hook-stick. Ngaphezu kwalokho, i-Anti-pollution type switch ingakwazi ukuxazulula ngempumelelo i-flash ngenxa yokungcola ngenkathi kusebenza inkinobho yokunqamula ukuze yanelise izidingo zabasebenzisi abasendaweni engcoliswe kabi.
GW5-40.5 SHINTSHA UKUKHIPHA
I-GW5-40.5 yangaphandle ye-high voltage disconnect switch isetshenziselwa ukwenza noma ukuphula isekethe lamandla aphezulu kumandla kagesi alinganisiwe 40.5kV, uhlelo lwe-AC 50 / 60Hz. Iyakwazi ukuvula nokuvala amandla amancane kanye ne-inductive yamanje.
GW4-40.5 SHINTSHA UKUKHIPHA
Uhlobo lwe-GW4 serial serial high voltage disconnect switch lithobela izidingo ku-GB1985-2004 High-voltage AC Disconnecting Switches and Earthing Switches, IEC62271-102: 2002AC Disconnecting Switches and Earthing Switches, and IEC60694: 1996 Common Clause for High voltage switchgear and Control Devices.
I-GN30-12 (D) Uchungechunge lwe-Indoor High Voltage Disconnect switch
Isishunquli sokunqamula i-GN30-12 (D) iyinsimbi kagesi yasendlini yamandla alinganisiwe we-12kV, ama-AC50 / 60Hz anezigaba ezintathu. Isetshenziselwa ukwenza ikhefu nokudlulisa okwamanje kwamathuluzi kagesi we-HV ngaphansi kwezimo ezinamandla kagesi futhi ongekho umthwalo.Ishintshi isebenza oxhumana naye ojikelezayo ojikelezwe kwi-switchgear kalula. It
yamukela udonga ngokufakwa futhi
I-GN19-12 (C) Uchungechunge lwe-Indoor High Voltage Disconnect switch
I-GN19-12 (C) inkinobho yokunqamula i-HV yasendlini isebenza kusistimu yamandla kagesi we-12kV, AC 50 / 60Hz. Inemishini yokusebenza ye-CS6-1 futhi isetshenziselwa ukwephula nokwenza isekethe ngaphansi komthwalo. Kunolunye uhlobo lokungcola olwengeziwe, uhlobo oluphakeme kakhulu namandla abonisa uhlobo.